ဒီနထေိ့ အဆ ငျပွလေား မေးရငျ အဆငျ မပွပေါ ဘူးလို့ ဆိုတဲ့ အကွောငျးကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောပွလာတဲ့ မမေဒီ – Shwe Likes
ဂီတေ လာကမှာ အောငျမွငျ မှုတှကေို ရရှိထားတဲ့ အဆိုတျော မမေဒီကေ တာ့ ဖဖေျောဝါရီ လအစက တညျးက ဖွဈပျေါနတေဲ့ တိုငျးပွညျ အခွေ အနေေ တှကွောငျ့ ပွညျသူတှနေဲ့ အတူ ပူးပေါငျးပါဝ ငျကာ တရားမြှတတဲ့ ဒီမိုကရစေီ ပွနျလညျရရှိေ ရးအတှကျ ကွိုးစားဆောငျရှကျခဲ့ကွ တာ ဖွဈပါတယျ။ေ မမဒီက လူထု လှုပျရှားမှုကွီးမှာ တကျတကျွ ကှကွှနဲ့ အားသှနျခှနျစိုကျ အနုပညာ ရှငျေ မာငျနှမတှနေဲ့ အတူ ပါဝငျလှုပျ ရှားခဲ့တာ ပဲဖွဈပါတယျ။
အခုလို ပါဝငျလှု ပျရှားခဲ့တဲ့ မမေဒီက လကျရှိမှာဆိုရငျ (၅၀၅)ကဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ အရေးယူခွငျး ခံထား ရတာကွောငျ့ သူမရဲ့ လုံခွုံရေး အတှကျ တိမျးရှော ငျနရေတာ ပဲဖွဈပါတယျ။ မကွာသေးခငျ ရကျပိုငျးတုနျး ကလညျး အိမျကနေ ထှကျခှာခဲ့ရတာ (၁)လကြျောခဲ့ကာ မိသားစုနဲ့လညျး အဆ ကျအသှယျ မရှိတာကွောငျ့ အားလုံးကို သတိ ရကွောငျး ပွောကာ Cover song ဖွဈတဲ့ အိမျွေ ပးသီခငျြးကို သီဆို ထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာဆို ရငျတော့ သူမရဲ့ Myday မှာ အဆငျ ပွလေား မေးရငျ အဆငျမွေ ပပါဘူးဆိုတဲ့ အကွောငျးကို ရငျဖှငျ့ပွောဆို လာတာ ပဲဖွဈပါတယျ။ “ကြှနျမတို့ အဆငျမွေ ပဘူးဆိုတာ အသကျပေးသှားရတဲ့ သူတှနေဲ့ အထဲရောကျသှားတဲ့ လူတှထေကျစာရငျ မွူမှုနျလောကျပဲ ရှိပါတယျ။ေ ပးဆ ပျသှားရတဲ့ လူတှရေဲ့ အသကျတှေ ခြှေးတှကေို အားနာတဲ့ စိတျနဲ့ တာဝနျမကနြေိုငျသေးဘူး ဆိုတဲ့ စိတျနဲ့ နနေတော ဒီနထေိ့ မပြျောနို ငျပါဘူး အေးဆေးစှာ မနနေိုငျပါဘူး ပုံမှနျတိုငျး နထေိုငျနတေဲ့ လူတှကေို မွငျရလေ ကြှနျမတို့
တိုငျးပွညျအနာဂတျဟာ ဒီမိုကရစေီနဲ့ တနျရဲ့လားလို့တောငျ မေးခှနျးထုတျနမေိပါ တယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဒီနထေိ့ အဆငျပွလေား မေးရငျ အဆငျမွေ ပပါဘူး….”ဆိုပွီး ရေးသား မြှဝပေေးလာ တာ ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိက ပုံမှနျအတိုငျး ဖွဈသေးတာ မဟုတျတာကွောငျ့ ပွညျသူတှေ သှေးမအေးသှားကွဖို့ တောငျးဆိုလိုကျပါရစေ…….
ဂီတေ လာကမှာ အောင်မြင် မှုတွေကို ရရှိထားတဲ့ အဆိုတော် မေမဒီကေ တာ့ ဖေဖော်ဝါရီ လအစက တည်းက ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ တိုင်းပြည် အခြေ အနေေ တွ​ကြောင့် ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ ပူးပေါင်းပါဝ င်ကာ တရားမျှတတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်ရရှိေ ရးအတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြ တာ ဖြစ်ပါတယ်။ေ မမဒီက လူထု လှုပ်ရှားမှုကြီးမှာ တက်တက်ြ ကွကြွနဲ့ အားသွန်ခွန်စိုက် အနုပညာ ရှင်ေ မာင်နှမတွေနဲ့ အတူ ပါဝင်လှုပ် ရှားခဲ့တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို ပါဝင်လှု ပ်ရှားခဲ့တဲ့ မေမဒီက လက်ရှိမှာဆိုရင် (၅၀၅)ကဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူခြင်း ခံထား ရတာကြောင့် သူမရဲ့ လုံခြုံရေး အတွက် တိမ်းရှော င်နေရတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းတုန်း ကလည်း အိမ်ကနေ ထွက်ခွာခဲ့ရတာ (၁)လကျော်ခဲ့ကာ မိသားစုနဲ့လည်း အဆ က်အသွယ် မရှိတာကြောင့် အားလုံးကို သတိ ရကြောင်း ပြောကာ Cover song ဖြစ်တဲ့ အိမ်ြေ ပးသီချင်းကို သီဆို ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီနေ့မှာဆို ရင်တော့ သူမရဲ့ Myday မှာ အဆင် ပြေလား မေးရင် အဆင်မြေ ပပါဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ရင်ဖွင့်ပြောဆို လာတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ “ကျွန်မတို့ အဆင်မြေ ပဘူးဆိုတာ အသက်ပေးသွားရတဲ့ သူတွေနဲ့ အထဲရောက်သွားတဲ့ လူတွေထက်စာရင် မြူမှုန်လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ေ ပးဆ ပ်သွားရတဲ့ လူတွေရဲ့ အသက်တွေ ချွေးတွေကို အားနာတဲ့ စိတ်နဲ့ တာဝန်မကျေနိုင်သေးဘူး ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ နေနေတာ ဒီနေ့ထိ မပျော်နို င်ပါဘူး အေးဆေးစွာ မနေနိုင်ပါဘူး ပုံမှန်တိုင်း နေထိုင်နေတဲ့ လူတွေကို မြင်ရလေ ကျွန်မတို့
တိုင်းပြည်အနာဂတ်ဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ တန်ရဲ့လားလို့တောင် မေးခွန်းထုတ်နေမိပါ တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီနေ့ထိ အဆင်ပြေလား မေးရင် အဆင်မြေ ပပါဘူး….”ဆိုပြီး ရေးသား မျှဝေပေးလာ တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိက ပုံမှန်အတိုင်း ဖြစ်သေးတာ မဟုတ်တာကြောင့် ပြည်သူတွေ သွေးမအေးသွားကြဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ…….
Source;May Madi FB Account